စစ်ကိုင်းက ဦးဇင်း ဦးသြသဓဆိုတဲ့ ဒီဦးဇင်းကို ဒီအတိုင်း ထားသင့်ပါသလား - Thadin
[ April 21, 2019 ] မြစ်ဆုံစီမံကိန်း တစ်ဦးတစ်ဒေါ်လာ ပေးလျော်မယ့် လှုပ်ရှားမှုစတင်မယ် NEWS
[ April 21, 2019 ] နွေရာသီ အပူကြောင့် အားလုံး Heat Stroke ကို သတိထားကြပါ HEALTHY
[ April 20, 2019 ] မိဘတွေကွဲသွားတဲ့အခါကျန်ခဲ့တဲ့ သားသမီးတွေကအလိုလို သိမ်ငယ်သွားတယ်တနည်းပြောရရင် “စိတ်ဒဏ်ရာရတယ် “ KNOWLEDGE
[ April 20, 2019 ] Vaseline သုံးပြီး ၁၀ နှစ်ပိုငယ်သွားအောင် အသားအရေထိန်းသိမ်းကြမယ်…! အလှပကဏ္ဍ
[ April 20, 2019 ] နေပူထဲ ကြက်ဥ ကြော်ပြတဲ့သူကို ရဲကဖမ်းဆီး…! NEWS
HomeNEWSစစ်ကိုင်းက ဦးဇင်း ဦးသြသဓဆိုတဲ့ ဒီဦးဇင်းကို ဒီအတိုင်း ထားသင့်ပါသလား
စစ်ကိုင်းက ဦးဇင်း ဦးသြသဓဆိုတဲ့ ဒီဦးဇင်းကို ဒီအတိုင်း ထားသင့်ပါသလား
April 14, 2019 Admin Kwee NEWS Comments Off on စစ်ကိုင်းက ဦးဇင်း ဦးသြသဓဆိုတဲ့ ဒီဦးဇင်းကို ဒီအတိုင်း ထားသင့်ပါသလား
စစ်ကိုင်းမြို့ ရွှေမင်းဝံရပ်ကွက် ပေါ်တော်မှုဘုရားအနီ မဟာကံကော်မြိုင်ကျောင်းတွင် နေထိုင်သော ဦးဇင်း ဦးသြသဓ ဖေ့ဘုတ်အကောင့်နာမည် အောင်မျိုးလွင်အမည်ဖြင့် သံဃာတော်နှင့် မသက်ဆိုင်သော လုပ်ရပ်များ လုပ်ဆောင်ပြောဆိုနေခြင်း၊ အပြင်မှာလည်း မိမိကိုယ်ကိုယ်မိမိ ပါရာဇိက ကျပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုပြီး သင်္ဃန်းဝတ်ဖြင့် အရက်သောက်ခြင်း မိုက်ရိုင်းစွာ ဆဲဆိုခြင်းများ ပြုလုပ်လျှက်ရှိနေပါသည်။
သို့ပါသောကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် မြိုနယ် သံဃာ့နာယက အဖွဲ့အစည်းများသိရှိအောင် ဒီပို့ကို ဝိုင်းရှယ်ပေးကြပါရန် ဗုဒ္ဓဘာသာ ကို တန်ဖိုးထား ရိုသေလေးစားသူတိုင်း ကိုတောင်းဆိုအပ်ပါသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနာတော်ကြီး ညစ်နွမ်းအောင်ဆောင်ရွက်နေသော သံဃာတော်များ မရှိရလေအောင် အတတ်နိုင်ဆုံး ဝိုင်းရှယ်ပေးကြပါ။
စစ်ကိုင်း မြို့နယ် သံဃာ့နာယက အဖွဲ့အစည်းများ သိရှိပြီး အမြန်ဆုံး ရှင်းလင်းနိုင်ပါစေ..။
စဈကိုငျးမွို့ ရှမေငျးဝံရပျကှကျ ပျေါတျောမှုဘုရားအနီ မဟာကံကျောမွိုငျကြောငျးတှငျ နထေိုငျသော ဦးဇငျး ဦးသွသဓ ဖဘေု့တျအကောငျ့နာမညျ အောငျမြိုးလှငျအမညျဖွငျ့ သံဃာတျောနှငျ့ မသကျဆိုငျသော လုပျရပျမြား လုပျဆောငျပွောဆိုနခွေငျး၊ အပွငျမှာလညျး မိမိကိုယျကိုယျမိမိ ပါရာဇိက ကပြွီးဖွဈကွောငျးပွောဆိုပွီး သင်ျဃနျးဝတျဖွငျ့ အရကျသောကျခွငျး မိုကျရိုငျးစှာ ဆဲဆိုခွငျးမြား ပွုလုပျလြှကျရှိနပေါသညျ။
သို့ပါသောကွောငျ့ မွနျမာနိုငျငံ သာသနာရေးဝနျကွီးဌာနနှငျ့ မွိုနယျ သံဃာ့နာယက အဖှဲ့အစညျးမြားသိရှိအောငျ ဒီပို့ကို ဝိုငျးရှယျပေးကွပါရနျ ဗုဒ်ဓဘာသာ ကို တနျဖိုးထား ရိုသလေေးစားသူတိုငျး ကိုတောငျးဆိုအပျပါသညျ။
ဗုဒ်ဓဘာသာ သာသနာတျောကွီး ညဈနှမျးအောငျဆောငျရှကျနသေော သံဃာတျောမြား မရှိရလအေောငျ အတတျနိုငျဆုံး ဝိုငျးရှယျပေးကွပါ။
စဈကိုငျး မွို့နယျ သံဃာ့နာယက အဖှဲ့အစညျးမြား သိရှိပွီး အမွနျဆုံး ရှငျးလငျးနိုငျပါစေ..။
တုံးအတဲ့ ယောက်ျားနဲ့ ထက်မြတ်တဲ့ ယောက်ျား
ဒီနှစ်သင်္ကြန်မှာ IC အဖွဲ့ကြီးနဲ့ သူနဲ့ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် လာတူနေပါတယ်ဆိုတဲ့ ကျော်ကျော်နန္ဒ..
Users Yesterday : 2403
This Month : 34967
This Year : 176424
Total Users : 535448
Total views : 2421204